Apple သည်ပြariနာကို Safari ၏အကြံပြုချက်များဖြင့်အတည်ပြုပြီးဖြေရှင်းသည် ငါက Mac ကပါ
Apple သည်ပြariနာကို Safari ၏အကြံပြုချက်များဖြင့်အတည်ပြုပြီးဖြေရှင်းသည်
Jordi Gimenez | | Apple, OS X ကိုအယ်လ် Capitan
တစ်ခုခုထိမိခဲ့တယ် Apple ကဒီမနက်မှာ!
ဟုတ်ကဲ့၊ Cupertino ကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုချက်အရ OS X 10.11.3 နှင့် Safari browser အတွက် iOS ထုတ်ကုန်များမှ version9to 9.2 ရှိသုံးစွဲသူများသည်သုံးစွဲသူအား URL address bar ကိုပုံမှန်နှင့်စာသားအတိုင်းအသုံးပြုခွင့်မပြုသည့်ပြbyနာကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့သည် စာသားပွားခြင်းအားဖြင့်အညွှန်းကိုပိတ်ပင်လိုက်သည်.
ယခုအချိန်တွင်အက်ပဲလ်ကပြsolနာဖြေရှင်းပြီးပြီဟုကြေငြာပြီးပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ဆက်တင်များမှအကြံပြုချက်များကိုပြန်ဖွင့်ပြီးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ဟုပြောနိုင်သည် ပြtheနာရဲ့အခြေခံကိုသိလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်ရစ်ခဲ့တယ် ဒီနေ့မနက်မှာကျွန်တော်တို့ Apple browser မှာပြproblemsနာတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။
အသုံးပြုသူများအားလုံးသည်ယခု bug မှလုံခြုံမှုမရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ အမှန်မှာသူတို့သည်အမှားကိုဖြေရှင်းပြီးပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၎င်းသည်တက်ကြွသော browser ၏အကြံပြုချက်များနှင့်ထပ်မံအလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းအချို့အသုံးပြုသူများကမူ၎င်းတို့အားအမှားတစ်ခုဆက်ပေးသည်။ iOS နဲ့ browser မှာပိတ်ထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့် function ကိုထပ်မံဖွင့်ခြင်းပြproblemsနာမရှိဘဲမနက်ဖြန်တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးပြproblemsနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းသင့်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်အလိုရှိလျှင်၎င်းသည်သင့်အားအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေ၊ ဟုတ်လျှင်ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် ၄ င်းတို့ကိုယခု activate လုပ်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ Safari နှင့် Mac, iPad, သို့မဟုတ် iPhone များကိုအရင် restart လုပ်ပါ။
ဤအခါသမယတွင်၎င်းတို့သည်ပျက်ကွက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါ။ ဖြေရှင်းမှုပြီးဆုံးပြီဟုကြေငြာရုံသာမကကုမ္ပဏီအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပြproblemနာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သောမြန်နှုန်းသို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဦး ဆောင်သောအမှားအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိလိုပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » Apple သည်ပြariနာကို Safari ၏အကြံပြုချက်များဖြင့်အတည်ပြုပြီးဖြေရှင်းသည်
ကျွန်ုပ်သည် Safari တွင်ယနေ့တိုင်ပြproblemနာရှိနေသေးပြီးဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ
ဒီနေ့ Safari ရှိကျွန်ုပ်၏အိုင်ပက်လေထဲကိုမသွားနိုင်ပါ
ငါအကြံပေးချက်ကိုပိတ်ထားပြီးနောက်ပင် Safari နှင့်အတူတူပင်ပြproblemနာရှိနေသေးသည်။
၁။ Safari က link တစ်ခုကိုနှိပ်သောအခါအခြား tab တွင်ဖွင့်သည်။
2. မည်သည့် pdf သို့မဟုတ်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုမကူးပါနှင့်။
သင် pdf တစ်ခုကိုပြသပါက "ဖွင့်ထား" ရွေးစရာမပေါ်လာပါ။
PDF စာရွက်စာတမ်းများကိုအခြား browser (ဘရောက်ဆာ) များတွင်ပြသထားသော်လည်း "ဖွင့်ဖွင့်ရန်" ရွေးချယ်စရာမပေါ်လာပါ။ ငါအော်ပရာ, Chrome, မာကျူရီနှင့်လင်းပိုင်ကြိုးစားခဲ့ပါပြီ။
သင် pdf, zip, doc, ... ကို download လုပ်၍ "ဖွင့်ဖွင့်" ပါသောအခြားအပလီကေးရှင်းများသို့ကူးပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်မည်သည့် browser ကိုမဆိုသင်သိပါသလား။
ပုဂ္ဂလိက browsing windows များတွင်ရှာဖွေခြင်းဖြင့် Apple ၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သောကြောင့်သင်ပြောနေတာကထူးဆန်းသည်။ အကယ်၍ သင်၏ပြproblemနာဆက်ရှိနေသေးလျှင်၊ မိတ္တူကူးယူပြီးထပ်မံမွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ် Mac ကို SAT သို့ပို့ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
OS X El Capitan 10.11.4 public beta2ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
Apple Watch2နဲ့အတူပြန်ပြီးထုတ်လုပ်မယ့်အကြောင်းကိုကောလဟာလတွေများနေပါတယ်